Igumbi elinelanga, elivulekileyo 'kwindlu kunye ne-pod' - I-Airbnb
Igumbi elinelanga, elivulekileyo 'kwindlu kunye ne-pod'
Igumbi lakho lokulala e i-townhouse sinombuki zindwendwe onguJenny
Ukubuyela kumjelo weRochdale kunye neRedacre woodland, sibekwe ngokugqibeleleyo ukuhamba unyaka wonke.
Imizuzu nje emi-5 ukusuka kwisikhululo sikaloliwe, kunye noololiwe abaqhelekileyo ukuya eLeeds naseManchester. Iibhasi kunye noololiwe abaya eHalifax bahlala rhoqo, utyelelo kulo naluphi na uluhlu lwemisitho kwiHolo yePiece.
Ngeevenkile, iikhefi kunye neebhari umgama nje oyimizuzu emi-5, sinodibaniso olukhulu lwamaphandle kunye nezinto eziluncedo.
Imakethi ehlala idumile, yangaphandle e-Hebden Bridge kukuhamba ngemizuzu engama-20 ecaleni komjelo.
Eli ligumbi elihle, elinelanga, elinendawo eyaneleyo yezinto zakho kunye nendlwana yokuhamba ukuba kuyimfuneko.
Iitawuli zakho nezinto zokondlula ibhedi ziyafumaneka.
Igumbi lokuhlambela elinebhafu neshawa, lelakho kuphela ixesha oza kulihlala.
Kukho ikhitshi elinento yonke apho unokulungiselela khona ukutya kwakho kunye negumbi lokuhlala elitofotofo. Wamkelekile kakhulu ukuba ungene uze ubukele imuvi kuNetflix ngokuhlwa, ukuba oko kuyahambelana nezicwangciso zakho.
Ngoku sine-smart tv kwigumbi lokulala. Inemizila yazo zonke ii-Freeview, kunye ne-Netflix, i-Amazon kunye neendawo ezinkulu ezifakiweyo.
Ukuba kufuneka usebenze ngexesha lokutyelela kwakho, vele undazise kwaye ndiza kukucima idesika yam ukuze uyisebenzise. Igumbi leofisi alikahonjiswa kodwa liwubona kakuhle umjelo.
Ndiza kuba kufutshane nexesha elithile, njengoBenson, i-cocker spaniel yam enobuhlobo.
Abakhweli beebhayisekile bamkelekile ukuba bagcine iibhayisekile zabo egaraji, ndiza kukunika isitshixo sokuyisebenzisa, de kuphele ixesha lokuhlala kwakho.
Iti kunye nekofu ziyafumaneka egumbini lakho, kunye neeti zonyango kunye netshokolethi eshushu. Kukho nefriji encinci egumbini kwaye ndiza kukubonelela ngobisi olutsha xa ufika.
Isidlo sakusasa ndiza kukulungiselela ngendlela othanda ngayo, kuquka isonka se-toast, amaqanda, i-jam, i-peanut butter kunye ne-muesli. Kukho indawo efrijini yokutya kwakho.
Ukuba unqwenela enye indlela, ikhefi ekwibhulorho inokukhetha okulungileyo, kunye nekofu kunye neecon rolls njl njl.
Uvumelekile ukuba usebenzise ipod ukuze usele ngokuhlwa, okanye wonwabele iholide. Kukho imbonakalo entle yomjelo kwaye yindawo epholileyo yokuhlala ngokuhlwa.
Kukho iibhari neebhari eziyi-3 eMytholmroyd, iDusty Miller esekoneni apho kukho ukutya, kukho ivenkile yokutyela iTapas kunye neendawo eziliqela onokuya kuzo.
Ndiyilungisa le ndlu okwangoku, ngoko kusenokubakho imizobo ebangel 'umdla (!) kodwa kukho ingxolo okanye nantoni na xa ndineendwendwe.
Kukho indawo yomlilo kwigumbi lokuhlala elinesitovu segesi sokupholisa ingokuhlwa.
Le ndlu yindawo enetreyini kaVictoria ngoko izitepsi ziyanyuka.
Sibuyele umva kwindlela ephambili ukuze ibe ntle kwaye ipholile kodwa isekwindawo yokuphosa amatye yeevenkile, iibhari, iibhasi kunye neetreyini.
50" HDTV ene-I-Amazon Prime Video, I-Netflix, I-Roku
4.99 · Izimvo eziyi-79
IMytholmroyd yilali enomtsalane enevenkile, iikhefi kunye nemivalo, zonke zingaphakathi komgama ohamba lula. Ukunyuka okwaziwayo kweCragg Vale, ethandwa ngabakhweli beebhayisikile, kukufuphi nje kwikona.
Kukho ukuhamba okuqaqambileyo malunga nalo lonke icala, kunye nemibono emangalisayo njengoko unyuka.
Indlela yomjelo ibonelela ngembonakalo, enye indawo ethe tyaba.
Iibhasi zibaleka rhoqo ukusuka kwindawo yokumisa nje imizuzu emi-5. kukwakho nesikhululo sikaloliwe esinoololiwe abaya eManchester naseLeeds.
I've only lived in this beautiful part of the Country for a relatively short time, but I've fallen in love with it and really enjoy sharing it with others. I love walking with my very active dog and enjoying the great outdoors.
I am double vaccinated and have had the booster.
I've only lived in this beautiful part of the Country for a relatively short time, but I've fallen in love with it and really enjoy sharing it with others. I love walking with my v…
Ndiza kuba kufutshane nexesha, ndidla ngokutya kwangethuba ndize ndilale kwangethuba, ngoko wamkelekile kakhulu ukusebenzisa ikhitshi kunye negumbi lokuhlala ngokuhlwa ukuba ungathanda. Ukuba andikho xa ufika, ndiza kukunika ikhowudi yokukhuseleka kwesitshixo kwaye ndiza kufumaneka lula ngefowuni/ngomyalezo.
Ndiza kuba kufutshane nexesha, ndidla ngokutya kwangethuba ndize ndilale kwangethuba, ngoko wamkelekile kakhulu ukusebenzisa ikhitshi kunye negumbi lokuhlala ngokuhlwa ukuba ungath…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Mytholmroyd